Inona no akora miraikitra amin'ny gorodona spc? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no akora miraikitra amin'ny gorodona spc?
Ny tany SPC dia miorina amin'ny calcium-poly ary polyvinyl chloride stabilizer amin'ny ampahany sasantsasany mba hamolavola fitaovana famenonana mitambatra. Fitaovana vaovao, efi-trano malefaka SPC vaovao. Ny gorodona SPC dia mampiasa vovoka kalsioma ho toy ny fitaovana mazoto lehibe.Amin'ny fametahana plastika sy ny fanesorana ny takelaka dia tsy misy akora manimba toy ny formaldehyde sy metaly mavesatra, ilay gorodona miaro ny tontolo iainana tsy misy formaldehyde-gratis 100%. 0 gorodona formaldehyde.
Ny famokarana rantsan-tsoavaly SPC dia mizara ho karazan-java-maniry telo: fitaovana vaovao, mifangaro ireo fitaovana taloha, ny fitaovana vita fanodinana.
Inona no akora miraikitra amin'ny gorodona spc? Ny atiny mifandraika